ခရစ်စမတ်ဦးထုပ်လေးနဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်cake pop | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ကြက်ဥအသားကပ်ကြော်(scotch eggs)
ဒီကိက်ပေါ့ လို့ခေါ်တဲ့ ကိက်လေးတွေက ကလေး လေးတွေအကြိုက်ပေါ့နော်။ မွေးနေ့ပွဲ၊ ပါတီပွဲတွေ မှာဒီ cake pop လေးတွေနောက်ပိုင်းတော်တော်ရေပန်းစားလားတာတွေ့ရပါတယ်။လုပ် ရတာလဲ လွယ်သလို လှလဲလှ စားလို့လဲကောင်းပါတယ်။ အိသက်သားရော သမီးလေးရော အရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်။ သားကြီးကို ကျောင်းကိုလုပ်ပေးတိုင်းသူ့သူငယ်ချင်းများ အတွက်ပါပိုလုပ်ပးရပါတယ်။ သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံမျိုးလေးတွေပေါ့။ ကိုယ်ကလဲ ကျွမ်းကျင်လှလို့မဟုတ်ပဲ သူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့လုပ်ပေးရတာပါ။ ဒီတလတော့ Food Magazine အတွက်ရေးပေးရင်းခရစ်စမတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့cake pop လေးများဖြစ်တဲ့ ခရစ်စမတ်ဦးထုပ်လေးနဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင် ပုံလေးလုပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ လွယ်ပါတယ်နော်။
-ကိတ်မုန့်လုပ်ပြီးသား( ဒီpost မှာ ready chocolate Brownie သုံးထားပါတယ်) အကယ်၍ လုပ်နည်းသိချင်ရင်တော့ မအိရဲ့Evy Food Lover blog မှာကြည့်ပါနော်.
– cake pop တုတ်ချောင်းလေးများ
– green candy melt ၁၀၀ ဂရမ်
– red candy melt ၁၀၀ ဂရမ်
– white chocolate ၅၀ ဂရမ်
– sprinkle ရောင်စုံလေးများ
( Candy melt များကပိုရင်လဲပြန်ခဲသွားမှာမို့သိမ်းထားလို့ရပါတယ်)
ပထမဆုံး ရိုးရိုးကိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိတ်မုန့်လေးများကိုခြေပါ။ ပြီးရင် butter cream နဲ့ရောလိုက်ပါ။ အဲဒါမှ ပျစ်လာပြီးပုံဖော်နိုင်ပါမယ်နော်။ ဒီမှာတော့အိသက်က ready made brownie ကိုသုံးတဲ့အတွက် သူကိုဘာ မှ မရောပဲနယ်လိုက်တာနဲ့ရပါတယ်။
ခရစ်စမတ်ဦးထုပ်လေး ပုံရော၊ခရစ်စမတ်သစ်ပင် ပုံရောက တြိဂံလုံးပတ်ပုံလေးများဖြစ်လို့ ပုံပါအတိုင်းလုပ်ပြီး ပန်းကန်တချပ်မှာတင်ထားပါ။
ပြီးရင်candy melt လေးများကို ဖျော်ပါမယ်နော်။ သူက microwave ထဲကို ၃မိနစ်အပူပေး မွှေလိုက်ရင်ရပါတယ်။ အရမ်းပျစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဟင်းချက်ဆီလေး အနဲငယ်စီရောရင် မပျစ်မကျဲအနေတော်ရပါမယ်။ အဲဒါမှကိတ်ကို နှစ်ရင်ချောချောမွတ်မွတ် လေးရပါမယ်နော်။
ပထမဆုံး အရည်ကို တုတ်ချောင်းထိပ်လေး နှစ်ပြီး ပုံဖော်ထားတဲ့ ကိတ်အောက်ခြေ အလယ်ကိုအနဲငယ် နစ်ဝင်သည်အထိထိုးစိုက်ထားပါ။ ၁၅မိနစ်ခန့်အခြောက်ခံထားပါ။ candy melt လေးခြောက်သွားမှကိတ်မုန့်နဲ့တုတ်ကိုကပ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး ကိက်မုန့်အလေးချိန်ကို တုတ်ချောင်းလေးကခံနိုင်ပါမယ်။ အဲဒါလေးခိုင်ပြီဆိုရင် သစ်ပင်လေးအရင်လုပ်ပါမယ်နော်။
အစိမ်းရောင် ထဲကို ကိတ်လေးကိုနှစ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အရည်စစ်အောင် ခွက်ပေါ်မှာပဲကိုင်ထားပေးပါအုန်းနော်။ စစ်ပြီးလို့ ချောချောမွတ်မွတ်လေးအရည် ကာပြီးသွားရင် ဖော့တခုမှာ ထောင်ပြီးစိုက်ထားပါ။
ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ထိပ်ဆုံးမှာ ကြယ်ပုံလေးတွေပါနေကျမို့ ကြယ်သကြားခဲလေးတင်လိုက်ပါတယ်။ အရည်များနဲ့ကပ်ပြီးတင်နေပါမယ်နော်။
၁၀မိနစ်ခန့်ထားပြီးလို့ခြောက်ကာနီးပြီဆိုရင် တုတ်ချောင်းတချောင်းရဲ့ ထိပ်လေးနဲ့ သစ်ပင်ဘေးက အချွန်လေးများထွက်အောင် လိုက်ဆွပေးပါ။ ပြီးမှ ရောင်စုံလေးများ ဖြူး၍၎င်း အနဲငယ်လိုက်ကပ်၍၎င်း အလှဆင်ကာအခြောက်ခံလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားပြီးရင် ခရစ်စမတ်သစ်ပင် လေး ရပါပြီ။
ဦးထုပ်လေးကလဲအထက်ပါနည်းအတိုင်း ခပ်ဆင်ဆင်လွယ်ကူပါတယ်။ အနီရောင် ထဲကိတ်ကိုနှစ်လိုက်ပါ။ စစ်ပါ။အနယ်ငယ်ခြောက်ပြီဆိုရင် ဦးထုပ်အောက်ခြေကို white chocolateအရည်လေးများဇွန်းဖြင့်ပတ်ပတ်လည်လိုက်တင်ပေးပါ။ ညီညာစရာမလိုပါဘူးနော်။ ပြီးရင် ဦးထုပ်ကအမွှေးလေးများလိုလိုက်ဆွမှာမို့ပါ။
ထိပ်ဆုံးမှာလဲ white chocolate ကိုအပုံလိုက်ခပ်သေးသေးတင်ပါ။ အဖြူများခြောက်ကာနီးရင် သိုးမွှေးလေးများနဲ့ထွန်းအောင်လိုက်ဆွပေးပါ။
ဦးထုပ်အလယ်အနီပေါ်မှာ ကြယ်သကြားခဲလေးကို white] chocolate အနယ်ငယ်သုတ်ပြီး အလှဆင်ပေးပြီး အဆုံးသတ်ခြင်းဖြင့် ခရစ်စမတ်ဦးထုပ်လေးလဲရပါပြီ။
5 comments on “ခရစ်စမတ်ဦးထုပ်လေးနဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်cake pop”
02/11/2012 @ 3:04 pm
So clever and smart 🙂
02/11/2012 @ 8:36 pm
05/11/2012 @ 9:32 am
25/12/2012 @ 12:51 pm
u r so smart ma ei thet .I like its………. 🙂